LA OGAADAY: Laacib Ka Tirsan Real Madrid Oo Ka Murugooday Soo Laabashada Zinedine Zidane – Latest Sports News
LA OGAADAY: Laacib Ka Tirsan Real Madrid Oo Ka Murugooday Soo Laabashada Zinedine Zidane
Toban bilood ka hor ayuu shaqada iska casilay Zinadine Zidane, laakiin haddana wuu soo laabtay iyadoo kooxdu meel hoose ku jirta si uu mar kale dhibaatada uga saaro, uguna horseedo guulo la mid ah kuwii uu laba sannadood iyo badh uu maamulayey gaadhsiiyey.
Waa dhab inay habsan tahay oo aanay haddaba ku jirin koobkii koowaad ee Zidane guusha ka bilaabay oo ahaa Champions League, balse wuxuu sare ugu soo ruqaansan karaa horyaalka LaLiga oo 12 dhibcood ay ka dambeeyaan Barcelona oo hoggaanka haysa xilli ay 11 ciyaarood oo kali ahi ka hadhsan yihiin horyaalka. Waa run in aanu soo qaban karin, amaba ay noqon doonto mucjiso ku cusub kubadda cagta haddii ay kaalinta koowaad timaaddo Real Madrid, balse maba aha shaqada hadda laga doonayaa inuu koobka qaado, waase inuu ka badbaadiyo naadigiisa dhibaatada hoos u dhaca ee geystay halkii ugu hoosaysay sannadihii ugu dambeeyey.
Haddaba markii lagu dhawaaqay in Zinedine shaqada tababare dib ugu soo laabtay, waxa markiiba bannaanka yimid hal ciyaartoy oo aan raalli ka ahayn oo aan jecalysanin in lasoo celiyo halyeygan hore.
Dani Ceballos, sannadkii ugu dambeeyey ee Zidane waxa uu ku qaadanayey kaydka, lamana siinin fursad, wuxuuse kalsooni ka helay tababareyaashii beddelay oo door weyn ka siiyey safkooda.
Waraysi uu bixiyey bishii September, ayaa waxa uu Ceballos ku sheegay in aanu garanaynin sababtii uu Zidane kursiga kaydka ugu hayey, ayna tahay inuu macallinku faahfaahin ka bixiyo.
“Zidane ayay tahay inuu sharraxaad ka bixiyo, sababta uu fursado ii siin waayey. Si adag ayaan anigu u shaqeeyey, waxaanan isku dayey inaan ku cadaadiyo inuu fursad isiiyo laakiin waqtiga ayaa kaa hor imanaya marka aad aragto in aanay macquul ahayn (inaad qanciso)” Sidaas ayuu yidhi Ceballos oo waraysigaa ka hadlayey, iyadoo uu muujinayey inuu ka raystay Zidane.
Ceballos oo hadalkiisa sii wata waxa uu tilmaamay inuu ka fikirayey sidii uu uga tegi lahaa Real Madrid haddii Zidane sii joogo, waxaanu yidhi: “Way iska caddayd in haddii Zidane uu shaqada sii wado aan iska bixi lahaa, laakiin imaatinka Julen Lopetegui ayaa wax walba oo adkaa beddelay.”
Laacibkan khadka dhexe ee hore ugu ciyaari jiray Real Betis waxa uu caddeeyey inuu si toos ah u weydiiyey Zidane sababta uu fursad usiin waayey, waxaanu yidhi: “Waxaan weydiiyey Zidane sababta aanan u ciyaaraynin, waayo maan fahmin, wuxuu ii sheegay inuu qiimeeyo ciyaartoyga iga soo horreeyey. Waxa jirtay mar ay dhaawacnaayeen Modric, iyo Kroos, wuxuuna baddalay hannaankii ciyaareed si uu boosaskooda u buuxiyo, taasina waxay igu ahayd dhaawac.”
Hadalka Ceballos wuxuu yimid intii uu Zidane kasii maqnaa Real Madrid, haddana wuu soo laabtay oo isla isagii ayaa samayn doono go’aamada xulashada ciyaaryahannada, waana sababta keentay in Ceballos uu mar kale fuulo culays, raalidana aanu uga noqonin in la magacaabo ZIZOU.